mutsauko pakati pekuyedza kuita uye kuyedza kuyerwa
Kuru Kuita Musiyano Pakati Pekuita Kwekuyedza uye Kuedza Mutoro
Ndeupi musiyano uripo pakati pekuyedza kuita, kuyedza mutoro, uye kuyedza kunetseka?
Performance Kuedza kuyera nguva yekupindura yechikumbiro pamwe nenhamba inotarisirwa yevashandisi. Chinangwa cheichi ndechekuwana hwaro hwekutanga uye chiratidzo chekuti maitiro anozvibata sei pasi pemamiriro ezvinhu. Inosangana nenguva inodikanwa yekupindura?
Kuremerwa Kuedzwa kuri kuyera nguva yekupindura kana iko iko kuiswa kune inopfuura yakajairwa nhamba yevashandisi.
Nguva yekupindura ichawedzera, kureva kuti kunyorera kuchanonoka pasi pemutoro unorema, asi chinangwa chekuyedza mutoro ndechekuona kana iko kunyorera kuchichengetedza mutoro wakawedzera pane server kana kuti ingazopunzika nekuuraya maseva.
Kuremerwa mutoro kunowanzo tangwa senhamba dzakaderera uye zvishoma nezvishoma kuwedzerwa pamusoro penguva yakapihwa kusvika yasvika pamutoro waunoda pahurongwa uye wozodzika pasi.
Kushungurudzika Kwayedza kana Soak Kwayedza
Kushungurudzika Kwayedza kana Soak Kuyedza kwakafanana nekuyedza mutoro asi isu tinotangazve mutoro pane server kwenguva yakareba, taura 1 awa.
Chinangwa chekuyedzwa kushushikana ndechekuona kuti pasi pemutoro unogara uripo kwenguva refu, maseva haapunzike, kunyangwe achipindura zvishoma nezvishoma.
Kushungurudzika kuyedzwa kunotanga zvakafanana nekuyera mutoro, e.k. zvishoma nezvishoma tichiwedzera mutoro pamaseva, asi kana mutoro uyu wasvika, tinotangazve mutoro mumwe chete pane server kwenguva yakapihwa uye tozoyera nguva yekupindura.
Kana tikaramba tichiwedzera mutoro kuseva, panouya poindi apo sevha isingakwanise kubata chero zvimwe zvikumbiro uye ikapunzika, pamwe ingangotanga kupa HTTP kukanganisa 500 kodhi yekupindura.
Kana izvi zvangoitika, isu tinowana chiratidzo chekwaniso yechishandiso, kureva kuti vangani vashandisi vanogona kunyorera chikumbiro.
Samsung Galaxy S5 yeVerizon uye AT & T yakadzika midzi; $ 18,000 bounty yekuunganidzwa?
Saka, iwe unofunga kuti iyo Galaxy S9 inodhura? Tarisa uone UK, Germany, Italy kana China mitengo!
Sei maPhones akura asiri kuwana Night Mode?